Nsogbu nke Tribbles ... er ... Wijetị | Martech Zone
Taa, mụ na ndị otu anyị riri nri ehihie wee gwa teknụzụ wijetị. Adịghị m akwado wijetị ime ihe n'eziokwu. Ekwenyere m na ha na-agbasa ịga n'ihu nke eserese nke blog, mechie ụfọdụ blọọgụ, ma na-ewu ya mgbe mgbe iji mee ka uche ha dịrị na ọ bụghị weebụsaịtị.
Ma ị na-agbakwunye wijetị or Ngwa na blọgụ gị, websaịtị gị, ibe iGoogle gị ma ọ bụ wijetị desktọọtụ gị kwesịrị ime ka ọ dịkwuo mfe ijikọta ọnụ na-enweghị mkpa maka mmemme. Naanị mado koodu ahụ ma ọ bụ budata wijetị ma pụọ.
Ebe kachasị amasị m maka ịlele Wijetị bụ Mashable, ma ahụghị m onwe m ịwụnye ha oge niile. Ana m achọ ndị baara m uru oge niile - anaghị m ahụta ya. Ikekwe, m ga-etinye wijetị ma ọ bụrụ na e nwere uru njin ọchụchọ, mana imirikiti wijetị na-ebuba onye ahịa ya na data anakọtara ka a na-ahụghị bot engine engine.
Nsogbu ọzọ nke wijetị bụ na otu ibe adịghị adaba niile. Ngwaọrụ kachasị mma n'echiche nke onye okike abughi ezigbo wijetị site n'echiche onye ọrụ. I see this over and over… M enweghi ike ime ka wijetị dakọtara na usability na imewe nke m website. Ihichapu nwere nnukwu na-eso dị ka onye ndu na wijetị… na-enye ụfọdụ ahụkebe nchịkọta na nsuso na wijetị.
Amaghị m na amatala m uru ahịa, n'agbanyeghị! M na-gravitate kwupụta mwekota site na API ebe m nwere ike dakọtara na anya na mmetụta nke saịtị m, tinye ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ, ma eleghị anya, rite uru nke ụfọdụ ịdị mma njin ọchụchọ.
Maka a Sọftụwia dị ka ikpo okwu maka ịde blọgụ Ọrụ dị ka Compendium, enwere uru maka wijetị. Ebe ọ bụ na wijetị na-ebu ma na-agba ọsọ na onye ahịa ma ọ bụghị na ihe nkesa ahụ, ị ​​naghị etinye usoro zuru oke n'ihe ize ndụ ma ọ bụrụ na mmadụ na-etinye ọtụtụ ụyọkọ. Nakwa, ọghọm SEO ghọrọ n'ezie uru maka ngwa nke siri ike site na nyocha Nchọgharị Nchọgharị. Wijetị agaghị atụgharị ịdị mma njin ọchụchọ gị.
Ọ bụrụ na ndị ahịa anyị chọrọ iweghara ibe ha, ọ ga-abụ na ha ga-ewute ọnụego mgbanwe ha (ndị mmadụ na-akpọ site na oku na-aga ime ihe na-akpata azụmahịa), yabụ anyị na-adọ ha aka na ntị megide ha. Anyị na-adabere na ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa anyị ka anyị wee gbasie ike iji mee ka ha kwekọọ na omume kachasị mma n'ịntanetị.
You na-eji wijetị? Ọ ga-amasị m ịnụ ụdị nsonaazụ azụmaahịa ị na-enweta.
Tags: 20122012 mobileNtanetị mkpanaka 2012imewe ihe omumaike nọmba ekwentị ntinyengwa ntanetịseo oku nsochimgbasa ozi mgbasa oziutoojoonbanye nbanye
Nov 26, 2008 na 12:22 PM
M nọnyeere gị Doug. Achọrọ m ịchọrọ wijetị mana ha na-ahapụ m mgbe niile ịchọrọ karịa. Achọrọ m ịbanye n'ime ha, gbanye ha, dakọtara ha na saịtị m ma enweghị m ike. N'ihi ya, m na-etinyekarị aka na nzuzo ma na-arụkwa aka m ihe niile. Eleghi anya, m bụ onye na-a suụ ara maka afọ ojuju m na-ewu ihe n'onwe m.
Nov 27, 2008 na 10:30 AM
Abụ m onye ọdịnaya ma na-ahụ maka nsonaazụ ma ọ bụ enweghị ebe ahụ maka saịtị asatọ, gụnyere nke m. A na echetara m oge niile (na mgbu!) Nke obere ihe ọ ga - ewe iji mee ka onye ọbịa bịara. N'ụzọ bụ isi, ọ bụrụ na itinye ihe na saịtị gị ọ ga-aka mma ịnọ ebe ahụ iji meziwanye ahụmịhe onye ọrụ yana / ma ọ bụ kpalie ndị mmadụ gaa na ntụgharị. E wezụga ihe abụọ ahụ ma tinye ihe mgbaru ọsọ azụmaahịa nke saịtị ahụ.